Layma's World: Hello....
Labels: That's what I wanna say, Wondering
“ ဖုန်းလာနေတယ် လို့ ဖုန်းဆက်ပြော တာပါ ”
ဒိန်းဂျားမှသာ ဂျားရော့ဗျာ ...
သားတို့က ရမယ်ဆို လိုချင်သေးတယ် ...
ရောင်းစားမယ် ... ငှားစားမယ် ...
မရသေးတာပဲ ခက်တယ် ...
တီ ... တီ သံကြားချင်ပါသော်ငြား ...
မဲကလည်း မပေါက်... လျှောက်လို့ကမရ ...
၀ယ်စရာ ပက်ကျံက မချိ ... အင်း ...
ဒါနဲ့ ... ခုဘယ်ဈေးပေါက်လဲဗျ ... နာမည်ပေါက်နော် ...
နိုင်…ဟယ်လို…ဟုတ်ကဲ့..ခုလိုအကြောင်းကြားတာကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဖုန်းဆက်တာပါ…။
ဂျယ်ရီ…လေးမ အရေးပါအရာရောက်လာတဲ့ အခါ ဂျယ်ရီကို ဖုန်း ၅ လုံးပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်….အားမငယ်ပါနဲ့ ….။
သက်…..ဟ…ဟ…သိလား….သဘောပေါက်တယ်ပေါ့….“ ရွှေဘုန်းပွင့် ဘုရား ” သွားတဲ့အခါ ဖုန်းမယူသွားနဲ့ နော်…..ထူးဆန်းတာတွေ ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်….ဟား…ဟား….
Mobile Phone with camera&sound recorder တွေကလူတော်တော်များများရဲ့ Privacy ကိုထိပါးလာနေတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောစေချင်တာပါ။
enics…..အော် ဂလိုလား….သိဘူးလေ….ဘာရေးစေချင်မှန်း….၊ သေချာပြောမှပေါ့…. လေးမ က ရေးချင်တာရေးပြီး ရမ်းတုတ်လိုက်တာပေါ့….၊ မောင်လေးက ဟိုမော်ဒယ်လေးကိုယ်စား ခံပြင်းနေတယ်ထင်တယ်……၊ enics ပြောတာမှန်ပါတယ်…. ခေတ်မီတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေကြောင့် လေးမ တို့ မှာ အိမ်ပြင်ရောက်တာနဲ့သွားသတိ ….. လာသတိ… စားသတိ… .ပြောသတိ နဲ့တရားတော်နဲ့ အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်နေရပါတယ်…..